Rikoooo.com - Fitantanana ny tany
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by hpwells1 » 03 Jolay 2018, 15:18
Salama daholo. Vao avy nisintona ny fonosana ATR 42-500 aho ary manana olana amin'ny fandrefesana ny Ground Handling. Tsy azoko atao amin'ny "Push Back" izany. Mahazo hatrany ny boaty Error amin'ny feo mena aho. Ny fiaramanidina hafa rehetra izay ampiarahiko amin'ny fandrefesana ny tany dia mandeha tsara. Nanampy gauge pop up hafa amin'ity fiaramanidina ity aho ary mandeha tsara izy ireo. Inona no tsy mety ataoko?
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by rikoooo » 03 Jolay 2018, 15:56
Tsy misy ny rakitra feo sasany, azafady alefaso ny kinova farany an'io add-on toy ny anio: https://www.rikoooo.com/downloads/viewdownload/86/766
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by hpwells1 » 03 Jolay 2018, 17:38
Nosoratana aho, nakarina ny rakitra, naverina naverina ary manana olana mitovy amin'ny fomba fitsaboana ny tany.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by rikoooo » 03 Jolay 2018, 17:41
Raha ny marina, ny hany antony tokana amin'izany dia ny tsy nekenao ny fomba fitenenana rehefa namporisihina ianao hanaiky ny antontan-taratasy DLL.
Hilaza aminao aho hoe ahoana no hamahana izany.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by hpwells1 » 03 Jolay 2018, 18:38
Erik, mampiasa ny down loader miaraka amin'ity fampidinana ity aho. Miantso ny feo aho hoe, haavony rehefa manidina. (miainga ary miantsona). Tsy hitako izay nila hanaiky hampiasako ilay feo.dll.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by DRCW » 10 Jolay 2018, 17:53
Hamarino ny fampandrenesana feo tsara indrindra FSX ary ataovy azo antoka fa ao ny rakitra feo momba ny Ground Handling. Ataovy azo antoka fa ny Dll dia hita ao amin'ny lahatahiry lehibe. Raha tsia, dia asio an-tanana amin'ny alalan'ny kopia ary mametaka. Ataovy azo antoka fa ao amin'ny FSX Famandrihana fiaramanidina fiaramanidina Misy feo dll izay hita ao amin'ny lahatahiry ground Handling folder. Manoro hevitra ianao hisintona Ground Handling 5 amin'ny https://www.fs-freeware.net/downloads/d ... l-etc.html
Hahita fanazavana bebe kokoa ianao ao amin'ny lahatsoratro momba ny fialam-boly amin'ny freeware ... ato amin'ity tranonkala ity